अब मास्क नलगाउने यात्रुले सार्वजनिक सवारी साधन चढ्न नपाउने — Sanchar Kendra
१अमेरिकी डलरको भाउ अहिलेसम्मकै महँगो
२कञ्चनपुरमा विद्यालयको छतमा सुतेका धामी मृत फेला
३दाइजोको निहुँमा पत्नी हत्या गरेर फरार युवक ४ वर्षपछि पक्राउ
४अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी बिदामा
५अर्थमन्त्रीबारे संसदीय छानविन समिति बनाउन माओवादी तयार !
६बजेटमा उठेका विषयबारे एमालेसँग छलफल गर्ने माओवादीको निर्णय
७कस्तो रहनेछ आजको मौसम ?
८खुमलटारमा माओवादी पूर्व स्थायी समिति बैठक जारी, पदाधिकारी टुंगो लगाउन कसरत
९नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
१०सकियो नेपाली काँग्रेस पदाधिकारी बैठक, के-के विषयमा भयाे छलफल ?
११एकैदिन ९० जनामा देखियाे कोरोनाकाे संक्रमण
१२इन्धन अभावले श्रीलंकामा विद्यालय बन्दको घोषणा
अब मास्क नलगाउने यात्रुले सार्वजनिक सवारी साधन चढ्न नपाउने
काठमाडाैं । उपत्यकामा मास्क नलगाउने यात्रुले सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्न नपाउने भएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर)का प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बैठकले शुक्रबार बिहानदेखि लागू हुने गरी उक्त निर्णय गरेको हो।
उपत्यकाको भीडभाडलाई मध्यनजर गरी सवारी साधन सञ्चालनमा छुट्टै मापदण्ड बनाएर लागु गरिएको हो। सोअनुसार स्वीकृत सिट क्षमताअनुसार मात्रै यात्रु राख्न, सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन, मास्क नलगाएका यात्रुलाई सवारी साधनमा प्रवेश रोक लगाउन आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै चालक सहचालकले अनिवार्य रूपमा मास्क, भाइजर र पञ्जा लगाउन, सवारी साधनको ढोकामा अनिवार्य रूपमा स्यानिटाइजर राख्न, सवारी साधनलाई अनिवार्य रूपमा दैनिक स्यानिटाइज गर्न भनिएको छ। आजदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि लागू हुने जनाइएको छ।
कोभिड-१९ सङ्क्रमण कायमै रहेकाले अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिस्किन, भीडभाड, जुलुस, जात्रा, महोत्सव नगर्न भनिएको छ। चाडपर्व स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पालना गरी साङ्केतिक रूपमा मनाउनु पर्ने आदेशमा उल्लेख छ। चाडवाडको बेला हुनसक्ने सम्भावित जोखिबाट बच्न पनि अनुरोध गरिएको छ।
यस्तै आधिकारिक काउन्टरबाट टिकट काटी यात्रा गर्न र सवारी साधनको छतमा यात्रु नराख्न पनि निर्देशन गरिएको छ। बैठक, गोष्ठी, सेमिनार गर्दा सकेसम्म भर्चुअल माध्यम प्रयोग गर्न र यदि उपस्थित हुनै परेमा स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पालना गर्न भनिएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थालाई यथासम्भव अनलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरिएको छ। उपस्थित हुनैपर्ने भएमा स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अपनाउन भनिएको छ। होटल पार्टी-प्यालेसले पनि कर्मचारीलाई सकेसम्म आफैं एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
सबै व्यवसाय सञ्चालन गर्दा भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड प्रयोग गर्न भनिएको छ। स्थानीय ढुवानी बिहान १:०० देखि ११:०० र अपराह्न ४:०० देखि ७:०० बजेसम्म नगर्न भनिएको छ भने निर्माण सामग्रीका ढुवानी बिहान १:०० देखि बिहान ५:०० बजेसम्म गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।